Orinasa fanadiovan-drivotra - Mpanamboatra mpamokatra rivotra i Shina, mpamatsy
Zava-maniry Hitombo ny zavamaniry
GPS Tracker / Ankizy / GT-C05
GPS Tracker / Ankizy / GT-C04
Speaker Bluetooth / Fanatanjahantena ivelany / BS-OS09
Fanadiovan-drivotra / Fiara / AP-C01
Fanadiovan-drivotra / Sterilizer / AP-S06
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL16
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL12
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL11
Ny zavamaniry hitombo hazavana / PGL06
Fanadiovan-drivotra / azo anaovana / AP-W01
Ity mpanadio rivotra rojo ity dia mamoaka ionoka oksizenina ratsy 1 tapitrisa, manadio ny rivotra manodidina anao, mamorona tontolo iainana mahasalama anao, manala ny fandotoana ny rivotra toy ny vovoka, PM2.5, vovobony, setroka sns mitondra ireo molekiola mitovy amin'ny fisintahana voajanahary (morontsiraka , riandrano, na tendrombohitra) eo anilanao. Ho tsapanao fa ao anaty ala ianao. Na aiza na aiza alehanao dia manadio ny 1m³ manodidina anao izy io, mamorona faribolana miaro mandeha mba hiambenana anao. Ka aza manahy ny olan'ny fandotoana, ny mpanadio rivotra rojo no hamono anao mandrakariva, ho eo amin'ny toerana azo antoka ianao izay mamorona ho anao.
Ity rojo vy ion ratsy ity dia miasa ihany koa amin'ny fanasitranana ny fahaketrahana, ny tsy fahitan-tory, ny toe-po ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso, ary ny fandidiana 5 desibela tena mangina dia mamela ny kalitaon'ny torimaso tsara eo am-pitandremana ny nofinao tsy ho voakorontana.
Ny bateria lehibe dia mety haharitra 10-12 ora, ampy ho an'ny filanao tontolo andro, ary ny famoahana haingana dia vonona ho amin'ny filan'ny andro manaraka.
Ataovy amin'ny vozonao izany, mora ny entina any amin'izay toerana rehetra, kofehy mihantona tsara, lanja maivana, tsy misy fanerena amin'ny fanaovana azy amin'ny vozona. Ary ny endriny mahafinaritra koa dia mahatonga azy ho haingo kanto. Izy io koa dia misy azo amboarina eo amin'ny vavahady fiara na apetraka eo ambony latabatra.
Safidy tsara ho an'ny fampiroboroboana ny marika. Ny logo dia azo atao pirinty na amin'ny laser.
Fanadiovan-drivotra / azo anaovana / AP-W02
Amin'ity fanadiovan-drivotra kely azo anaovahana ity dia afaka miaro tsara ny tenanao sy ireo malalanao ianao, na dia kely aza izany dia afaka miasa ho an'ny faritra 1m³ ivelany na 3m³ anaty trano hamoronana faribolana miaro. Ity mpanadio rivotra rojo ity dia mamoaka ionoka ôksizenina 6,5 ​​tapitrisa mahery, manadio ny rivotra manodidina anao, mamorona tontolo iainana mahasalama anao, manala amin'ny fomba mandaitra ny fandotoana ny rivotra toy ny vovoka, PM2.5, vovobony, setroka sns ary mitondra ireo molekiola mitovy amin'ny fihemorana voajanahary ( morontsiraka, riandrano, na tendrombohitra) eo anilanao. Hahatsapa ianao fa any anaty ala. Na aiza na aiza alehanao dia hanadio ny efitrano 1m³ manodidina anao izy io, mamorona faribolana miaro an-tongotra hiambenana anao. Raha mbola miaraka amin'ny mpanadio rivotra rojo ianao, aza manahy ny olan'ny fandotoana, hamonosina anao hatrany izany, ho eo amin'ny toerana azo antoka ianao izay mety aminao.
Ity rojo vy ion ratsy ity dia miasa ihany koa amin'ny fanasitranana ny fahaketrahana, ny tsy fahitan-tory, ny toe-po ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso, ny fandidiana faran'izay mangina miantoka ny kalitaon'ny torimaso tsara ary tsy hanelingelina ny nofinao.
Miasa mandritra ny 10-12 ora ny bateriny lehibe, ampy ho an'ny filan'ny tontolo andro, ary mamaly haingana ny 1-2 ora, miomàna ho an'ny filan'ny andro manaraka.
Ny fitafiana azy amin'ny tendanao, tsy misy fanerena, kofehy mihantona tsara sy lanja maivana. Ary mazava ho azy fa haingon-trano tsara ihany koa izy io. Izy io koa dia misy azo amboarina eo amin'ny vavahady fiara na apetraka eo ambony latabatra na apetraka eo akaikin'ny fandrianao.
Fanadiovan-drivotra / azo anaovana / AP-W03
Amin'ity fanadiovan-drivotra kely vita amin'ny rojo ity dia afaka miaro tsara ny tenanao sy ireo malalanao ianao, na dia kely aza izany dia afaka manadio tsara ny faritra 1m³ ivelany na 3m³ anaty trano hamoronana faribolana miaro. Ity mpanadio rivotra rojo ity dia mamoaka ion-tsolika 99 tapitrisa mahery, manadio ny rivotra manodidina anao, mamorona tontolo iainana ara-pahasalamana ho anao, manala ny fandotoana rivotra toa ny vovoka, PM2.5, vovobony, setroka sns ary mitondra ny morontsiraka, riandrano na tendrombohitra eo anilanao. Na aiza na aiza alehanao dia hanadio ny efitrano 1m³ manodidina anao izy io, mamorona faribolana mpiambina mandeha mba hiarovana anao. Raha mbola miaraka amin'ny mpanadio rivotra rojo ianao, aza manahy ny olan'ny fandotoana, dia hamonosana anao soa aman-tsara hatrany, ho ao amin'ny faritra azo antoka noforoniny ho anao ianao.
Ity rojo vy ion ratsy ity dia miasa ihany koa amin'ny fanasitranana ny fahaketrahana, ny tsy fahitan-tory, ny toe-po ary ny fanatsarana ny kalitaon'ny torimaso, ny fandidiana mangina tena miantoka ny torimaso tsara anao ary miambina ny nofinao.
Ny fitafiana azy amin'ny tendanao, tsy misy fanerena, kofehy mihantona tsara sy lanja maivana. Ary mazava ho azy fa haingon-trano tsara ihany koa izy io. Azo apetraka eo ambony latabatra na apetraka eo akaikin'ny fandrianao koa izy io.
Safidy tsara ho an'ny fampiroboroboana ny marika.
Fanadiovan-drivotra / azo anaovana / AP-W04
Ity fanadiovan-drivotra tsotra ity dia natao hahantona amin'ny vozona, na aiza na aiza alehanao, ny ion ratsy navoaka dia hanadio ny rivotra manodidina anao, hiaro anao amin'ny fotoana rehetra. Azonao antoka fa voakarakara tsara ianao. Azonao atao koa ny mametraka azy eo ambonin'ny birao na ao anaty fiaranao. Ny endrika tsotra ihany koa dia haingo mahafinaritra.
Fanadiovan-drivotra / azo anaovana / AP-W05
Ity mpanadio rivotra maivana ity dia natao ho an'ny ankizy mihantona amin'ny tendany, endrika mahafatifaty, loko marevaka. Ny mpanadio dia mamoaka ionona ratsy, hanadio tanteraka ireo entona manimba eny amin'ny rivotra sy hiaro ny ankizy. Azonao antoka fa voakarakara tsara ny zanakao. Ento any amin'ny toerana rehetra izy io ho fiarovana anao amin'ny fotoana rehetra.
Fanadiovan-drivotra / Sterilizer / AP-S01
Io mpanadio rivotra azo entina io dia manambatra ny fiasan'ny rivotra mahery sy ny fiasan'ny sterilizer. Miaraka amin'ny vakana jiro UVC miorina an-trano, dia mety hamono amin'ny fomba mahomby ny bakteria sy mikraoba. Ary miaraka amin'ireo ambaratonga fanadiovana avo lenta, ny lafiny rehetra dia miaro anao amin'ny zavatra manimba, ny entona ary ny bakteria. Ataovy azo antoka ianao amin'ny PM2.5, vovoka, vovobony, setroka, bakteria, mikraoba, formaldehyde, benzene, VOC ary fofona ratsy sns.
Amin'ny maha purifier portable anao misy batterie izay mety haharitra 5ora-8ora mahery, mora aminao ny mitondra na aiza na aiza. Ento miaraka aminao izy io, ho voaro ianao amin'ny fotoana rehetra.
Fanadiovan-drivotra / Sterilizer / AP-S02
Fiaraha-miasa marobe, sterilizer UVC, fanadiovana ion ratsy, ary fanadiovana HEPA, mihoatra ny 99% dia manala amin'ny fomba mahomby ireo raharaha manimba. Miaro ny fahasalamanao io sterilizer mpanadio rivotra tsara tarehy io.
Azonao atao ny manamboatra azy amin'ny alàlan'ny fananganana batterie, azo entina any amin'izay tianao, ho an'ny piknik, ao anaty fiara, eo amin'ny biraonao na eo akaikin'ny fandrianao. Arovy ianao mandritra ny fotoana rehetra. Manana aromatherapy koa izy io, manaova ny hanitra tianao, ankafizo bebe kokoa amin'ny fiainana.
Fanadiovan-drivotra / Sterilizer / AP-S03
Ity fanadiovan'ny modely ity dia miasa miaraka amin'ny asan'ny sterilisation UVA / UVC miantoka ny famonoana bakteria sy mikraoba amin'ny fomba mahomby. Ary miaraka amin'ny ionona négatiantika avo lenta mamoaka hamono zavatra manimba. Ny mpanadio dia miantoka tontolo azo antoka ho anao.
Ny endriny tsotra sy ny fahatsapana tanana vita amin'ny fingotra dia manome traikefa lafo vidy. Miaraka amin'ny bateria maharitra maharitra 4 ora dia azo entina any amin'izay ilanao azy.
Fanadiovan-drivotra / Sterilizer / AP-S04
Ny fanadiovan-drivotra tsotra namboarina dia voatahiry miaraka amin'ny H13 HEPA avo lenta mba hanivanana ireo zavatra manimba eny amin'ny rivotra. Izy io koa dia sterilizer mahery avy amin'ny jiro UVA / UVC roa izay miasa mafy hamonoana bakteria sy mikraoba. Arovana eo ambany fiarovanao ianao.
Ny endrika kanto koa dia haingo mahafinaritra. Azonao atao ny mametraka azy io na aiza na aiza ilainao.
Fanadiovan-drivotra / Sterilizer / AP-S05
Ity manadio rivotra tsara tarehy ity dia miorina amin'ny vakana fanaovan-jiro UV, 99.9% mamono amin'ny fomba mahomby ny bakteria sy mikraoba. Nasehon'ny siansa fa ny halavan'ny halavan'ny ultraviolet dia afaka manimba mora foana ny firafitry ny molekiola ao amin'ny ADN na ny RNA amin'ny viriosy bakteria, ka mahatonga ny fahafatesan'ny sela mitombo sy ny fahafatesan'ny sela miverina amin'ny laoniny, hahatratrarana ny vokatry ny famafana sy ny famonoana otrikaretina.
Izy io koa dia manana generator ion mahery miiba amin'ny angovo avo lenta, isaky ny miaina ianao dia hahatsapa toy ny any anaty ala.
Ny famolavolana paikady dia tsy maka habaka, mandeha mangina aorian'ny fandidiana iray -key, mamono bakteria sy potipotika vovoka amin'ny rivotra. Ny fanamasinana fiara iray manontolo dia manome anao tontolo ivoahan'ny fiara azo antoka sy mahasalama, avelao hankafizanao amin'ny dia mahasalama.
Ity fanadiovan-drivotra tsotra noforonina ity dia mampifangaro ny asan'ny sterilisation sy ny fiasan'ny fanadiovana ny rivotra, ary miaraka amin'ny endrika kanto dia safidy tsara ho an'ny mpanadio rivotra.
Ny famonoana UV matihanina dia miasa miaraka amin'ny jiro UV feno fotolisis feno 3, mampita ny rivotra ivelany mankany amin'ny efitrano fitsaboana UV aorian'ny fanamasinana, avy eo mamoaka taratra ultraviolet 250-270 lava, mandrava ny sisa tavela amin'ny rivotra. Ny firafitry ny molekiola ao amin'ny ADN sy ny RNA amin'ny mikraoba dia mahatratra ny vokatra famonoana otrikaretina. Ny fahombiazan'ny 99,9% dia mamono bakteria sy mikraoba.
Famotsorana ny ion ratsy, omeo vitamina feno ny rivotra. Ny ion ratsy dia antsoina hoe vitamina amin'ny rivotra, izay afaka mampihena ny vovoka sy ny tsiro, manatsara ny fiononan'ny rivotra ary mamorona ny fofon'ain'ala aorian'ny orana. Famolavolana fisotroana rivotra manodidina, famoahana rivotra madio haingana hanaronana ny trano iray manontolo.
Bateria azo entina sy tantanana hoentinao any amin'izay ilanao azy, ary jiro alina malefaka mahafinaritra mandritra ny alina. Safidy tsara ho an'ny mpanadio rivotra.
Fanadiovan-drivotra / Sterilizer / AP-S07
Ny mpanadio rivotra azo entina dia natao maoderina, ary habe amin'ny tavoahangin-drano. Tena mety aminao ny mitondra any amin'izay ilainao. Izy io dia miaraka amin'ny sivana H13 Hepa izay afaka manadio ny raharaha manimba amin'ny rivotra ny ambaratonga avo indrindra, manala ireo poti-dratsy manimba 99,9% toy ny PM2.5, vovoka, vovobony, setroka. Tsy fanadiovana fotsiny izy io, fa koa sterilizer, miaraka amin'ny jiro UVC / UVA LED izay afaka manimba ny bakteria sy mikraoba miaraka amin'ny halavan'ny halavan'ny jiro ny 99.9%. Ilaina sy manampy tokoa izy io indrindra amin'ny vanim-potoana covid-19, afaka miaro anao amin'ny mety ho fandrahonana sy fahavoazana izy io, ary hahatonga anao ho voan'ny aretina azo antoka.
Ny fanadiovan-drivotra dia miasa ho an'ny efitrano 10m³- 15m³, ny teknolojia mampiavaka azy izay mamorona onja mahery kokoa ary manadio ny rivotra ao anatin'ny 10 minitra. Azonao atao ny manantena ny fiarovany fotoana maharitra miaraka amin'ny jiro UVC / UVA mandritra ny androm-piainany 10000 hrs. Amin'izany no ahafahanao manadio ny habakao manokana toy ny fiara, efitrano fandriana ary birao. Mahatonga anao hahatsapa ho azo antoka kokoa amin'ny toerana manokana misy anao ary manampy anao indrindra hiaro ny fianakavianao.
Ny manadio dia miasa hanitra hanitra koa, azonao atao ny manapa-kevitra ny tsiro tianao. Misy jiro manga malefaka ihany koa hilazana fa miaro anao izy io. Amin'ny alina, ao anaty fiara na ao amin'ny efitrano fandriany, dia mamorona atmosfera tantaram-pitiavana izany, mahatonga ny alina tsy hitondra mankaleo sy be fanahiana fa mahafinaritra. Ao amin'ny efitrano fandriana dia tsy manadio ny efitranonao fotsiny izy io fa manalefaka ny hozatrao koa, mampitony ny fanahinao ary manome anao torimaso mamy. Fitaovana tena manampy tokoa amin'ny fiainana andavanandro izy io.
Ny tanjonay dia ny fanatanterahana ny filan'ny mpanjifa,
mahasoa ny fahasalamana, ny fahasambarana ary ny fiainana tsaratsara kokoa!
Telefaona:+86 199 4190 9499
Adiresy:No.1, Rd ShengTao, làlana YueXi, distrikan'i Wuzhong, tanàna Suzhou, faritanin'i JiangSu, Sina. Kaody paositra: 215100
Jiro zavamaniry, Mamboly Lightin ny zavamaniry, Mitombo Ligh, Mitombo ny avotra, Mamboly hazavana, Mitombo Lightin,